အိုင်ဖုန်း SE ကိုဝယ်ရတာဘာကြောင့်လဲ Gadget သတင်း
iPhone SE ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းငါးချက်သည်ကြီးကျယ်သောအကြံဖြစ်သည်
Villamandos | | Apple, မိုဘိုင်း, NOTICIAS
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာစာဖတ်ခြင်း၊ ကြားခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီဟူသောကောလာဟလများစွာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Apple သည်အသစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ iPhone ကိုအရှေ့တောင်။ ဤစမတ်ဖုန်းအသစ်သည် ၄ ​​င်း၏စွမ်းအားကိုအထူးသဖြင့် ၄ လက်မသာရှိသောမျက်နှာပြင်အတွက်ဖြစ်သည်။ များများစားစားမရှိသော်လည်းသေးငယ်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုပိုနှစ်သက်သောသုံးစွဲသူအမြောက်အများရှိနေသေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့ pants အိတ်ဆောင်တွင်အဆင်ပြေစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ ၄ လက်မဖန်သားပြင်ပါသော terminal မရှိနိုင်သည်ကိုဝန်ခံရပါမည်။ သို့သော်ထိုအကြောင်းကြောင့် iPhone SE အသစ်သည်ကြီးမားသောမိုဘိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလျစ်လျူရှု။ မရပါ။ ဒါ့အပြင်နှင့်သင်၌မဆိုမေးခွန်းများရှိပါက, ယနေ့ငါသည်သင်တို့ကိုပြသသွားပါမယ် iPhone SE ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းငါးချက်သည်ကြီးကျယ်သောအကြံဖြစ်သည်.
အကယ်၍ သင်သည် ၄ ​​လက်မအရွယ် screen ရှိသည့် iPhone သည်မည်မျှစွမ်းအားကြီးမားသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်အတွက်မဟုတ်ကြောင်းသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားပါက၊ Apple terminal အသစ်ကို ၀ ယ်ရန်ပင်မစဉ်းစားပါနှင့်၊ အဆိုပါ box ထဲကထဲကယူပါ။
2 iPhone ဟောင်းကိုချစ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်း
4 ကင်မရာ, တိုးတက်နှင့် updated
5 နောက်ဆုံးအနေနဲ့ "စီးပွားရေး" အိုင်ဖုန်း
အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည် ၄ ​​လက်မအရွယ် iPhone ကို ၀ ယ်လိုပါကယခုအချိန်အထိခေတ်နောက်ကျနေပြီး iPhone4သည်ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ရှိပြီး iPhone 5S ကိုသာမှီခိုနေရသည်။ iPhone SE ၏မြင်ကွင်းတွင်ပေါ်လာသောကြောင့်၎င်းကိုလိုလားသူမည်သူမဆို iPhone အသစ်များ၊ ခေတ်သစ်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသောမျက်နှာပြင်နှင့်မျက်နှာပြင်သေးငယ်စွာဖြင့်ရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်အတွက်သို့မဟုတ်သင်အတွက်ဒီ iPhone SE ဟာရွေးချယ်စရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာယနေ့ခေတ်အတွက်ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်လိုအပ်ပေမယ့်အခြားသူတွေအတွက်တော့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၄ လက်မမျက်နှာပြင်သည်အချို့အတွက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားသူများအတွက်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်.
အကယ်၍ သင်သည်မိုဘိုင်းပစ္စည်းသေးသေးလေးတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါက iPhone SE သည်အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရစျေးကွက်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်မည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်အခြားဆိပ်ကမ်းများနှင့်ဝေးကွာလိမ့်မည်။
iPhone SE ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ခဲ့ပြီးကြားခဲ့ရသည် နောက်ဆုံး iPhone 5S နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးကိုစားပွဲပေါ်မှာထားမည်ဆိုပါကကွဲပြားခြားနားမှုကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပင်ပြောနိုင်သည်။
၎င်းသည်အားနည်းချက်တစ်ခုဟုထင်ရဖွယ်ရှိသည်၊ လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ iPhone 5S ၏ဒီဇိုင်းသည်သမိုင်းတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး iPhone SE နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်မှာသေချာသည်မှာသေချာသည်။ အလွန်အပြုသဘော။ ထို့အပြင်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone 6S ရရှိနိုင်သောအရောင်များ၊ ငွေ၊ ရွှေ၊ အာကာသမီးခိုးရောင်နှင့်နှင်းဆီပန်းတို့ဖြင့်ဤ iPhone အသစ်ကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
iPhone SE အရွယ်အစားရှိသော်လည်းမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်မည်သည့် application ကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်စွမ်းအင်နှင့်အာမခံချက်ရှိသောအာမခံချက်ရှိသည့်အစစ်အမှန်သားရဲတကောင်အတွင်း၌ရှိသည်။
ဒီအိုင်ဖုန်းအသစ်ကိုငါတို့လွင့်ပစ်လိုက်ရင်မင်းတို့ကတစ်ခုရှာလိမ့်မယ် iPhone 9S သို့မဟုတ် 6S Plus တွင်တွေ့ရသည့် A6 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 2GB RAM ပါရှိသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် iPhone SE ဟာ iPhone 5S ထက်နှစ်ဆစွမ်းအားပိုတယ်လို့ပြောနိုင်ပြီးဈေးကွက်ထဲမှာအစားထိုးနိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
အတော်များများက Device ၏အရွယ်အစားကို၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။ iPhone SE အတွက်မူအတိုင်းအတာလျှော့ချထားသော terminal ကိုတွေ့ရသည်။ သို့သော်စွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရအစစ်အမှန်သတ္တဝါတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားကအရေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီစမတ်ဖုန်းအသစ်လိုနေတာကအနည်းဆုံးတော့အရေးမကြီးဘူး။
ကင်မရာ, တိုးတက်နှင့် updated
iPhone SE သစ်၏ကင်မရာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်မှာ ၈ ဆ megapixel iSight ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည့် iPhone 5S နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်တိုးတက်ခဲ့သည်။ iPhone 12S တွင်တွေ့ရသော6megapixels နှင့်တူညီသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်အရွယ်အစားသည်ကြီးမားသောအရည်အသွေးရှိသောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ယူရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကင်မရာနှင့်မကိုက်ညီပါ။
အခြားသောကင်မရာများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ၄၀ ဗီဒီယိုကို ၃၀ fps၊ ၁၀၈၀p ဗီဒီယို ၆၀ fps နှင့် ၇၂၀p resolution (4 fps) (30p resolution ဖြင့် 1080 fps) ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောရမည်။ Plus အားလည်း Live Photos ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်၎င်းသည် iPhone 6S နှင့်အတူယူဆောင်လာသည့်ထူးခြားဆန်းသစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အနောက်ကင်မရာလိုပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုများနေတယ်၊ ​​ရှေ့ကင်မရာကအတော်လေးနောက်ကွယ်မှာရှိနေတယ်၊ ​​iPhone 5S မှာတွေ့ရတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်မပြောင်းလဲဘူး။ အာရုံခံကိရိယာသည် ၁.၂ megapixels ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရံဖန်ရံခါ selfie ရိုက်ကူးခြင်းသည်လုံလောက်မှုမရှိပေ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ "စီးပွားရေး" အိုင်ဖုန်း
Apple က iPhone 5C ကိုမိတ်ဆက်ပေးချိန်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးသုံးစွဲသူအားလုံးလက်လှမ်းမီနိုင်သည့် iPhone တစ်ခုသည်နောက်ဆုံး၌စျေးကွက်သို့ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အများစုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်၊ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဈေးနှုန်းမြင့်မားသောကိရိယာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီဇိုင်းကိုအဓိကပြုပြင်ပြီးရရှိနိုင်သည့်အရောင်များစွာကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် iPhone S ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုအရသုံးစွဲသူများသည်စျေးကွက်ထဲတွင်စျေးပေါသော iPhone တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘယ်သူကမှသူတို့ကငါတို့ကိုပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လျှော့စျေးနှုန်းနဲ့ဝယ်နိုင်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ကြဘူး။ ဥပမာ၊ iPhone 6S နဲ့ iPhone 5C ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာစီးပွားရေးကျတယ်ဆိုတာပြောနိုင်တယ်။ ။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် လာမယ့်ရက်များအတွင်းအိုင်ဖုန်း SE စျေးကွက်သို့ကျရောက်နိုင်မည့်စျေးနှုန်းများ;
iPhone SE 16GB - ဒေါ်လာ ၃၉၉
iPhone SE 64GB - ဒေါ်လာ ၃၉၉
၎င်းသည်သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းအပေးအယူမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် iPhone ကိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား iPhone 6S နှင့်အလွန်ဆင်တူသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပေးသည်မှာသေချာသည်။
မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးဖြင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းရှိရန်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်ဒီဖုန်းသည်သင်အတွက်မဟုတ်ပါ၊ အကယ်၍ သင်သည် ၄ ​​လက်မအရွယ် screen နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို၎င်းကိုယူဆောင်လာနိုင်မည့်အရွယ်အစားရှိသော terminal ကိုရှာဖွေနေလျှင်၊ iPhone အသစ်သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားရှိသော်လည်းထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် iPhone 6S နှင့်တူညီသောစမတ်ဖုန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။
iPhone SE ကို ၀ ယ်ရတာဘာကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်တစ်ခုရှိသေးလဲ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » iPhone SE ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းငါးချက်သည်ကြီးကျယ်သောအကြံဖြစ်သည်
Heitor တော ဟုသူကပြောသည်
မနက်ဖြန် iPhone SE ကို ၀ ယ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မင်းပြောနေတာကမင်းကမကောင်းဘူးလို့မင်းပြောလိမ့်မယ်။ လူတွေကသူတို့နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လူတွေက ၀ ယ်ကြတာပေါ့။ .. မကောင်းဘူးလို့ငါမပြောချင်ဘူး၊ ဆန့်ကျင်ဖက်ကတော့ Apple နဲ့ Samsung ကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ Samsung ကိုအသုံးမပြုခင်မှာ Apple ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ Samsung နဲ့အတူငါဟာ high-end model တွေပဲ။ ..back iPhone ကပြန်လည်ကောင်းမွန်ကောင်းမွန်ပြီးကောင်းမွန်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တွင် iPhone5S tb ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ၆ အပေါင်း ပို၍ ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ပထမတစ်ခုရည်ညွှန်းသည်။ passada တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သည်။ ယခုလက်ရှိ6လက်မအရွယ်ရှိစမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်ရန်အားနည်းချက်တစ်ခုတွေ့ရသည်။ ၅.၅ လက်မထက်မနည်းပါ။
Heitor Lopes အားပြန်ကြားပါ
Jose muñoz ဟုသူကပြောသည်
ငါ iPhone6ကိုသုံးပြီးကတည်းကလက်ချောင်းတွေအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ မကြာသေးမီလများကပိုဆိုးလာတယ်၊ ငါ tendinitis နဲ့ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဆီသွားတယ်။ အထူးသဖြင့်လက်ျာလက်မလက်မနဲ့လက်ညှိုးအညိုတွေများတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်သူတို့ငါသူတို့နာကျင်မှု generate အရာဖြစ်တယ်။
ဒီဟာ iPhone6အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟာသတင်းကိုပျော်ရွှင်ပြီးမကြာခင်မှာပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့စတိဗ်ဂျော့ဘ်ဟာ iPhone4ဖြစ်သင့်တယ်လို့မှန်တယ်ထင်တယ်″
Samsung Gear S2 သည် iOS နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
Apple Keynote ကိုဘယ်လိုကြည့်ပြီးလိုက်နာမလဲ